G40 Archives » 263Chat, Convening dialogue in Zimbabwe
Shumba Blasts Mnangagwa, Invites Mugabe To Join The Opposition
Lovejoy Mutongwiza	 Mar 12, 2018
He called on the deposed Mugabe to be brave and join the opposition movement, a move which Shumba said will help the country know how elections have been alleged to be rigged.
Jeoffrey Ncube	 Feb 14, 2018
Lovejoy Mutongwiza	 Dec 27, 2017
Lovejoy Mutongwiza	 Dec 18, 2017
Minister of Sports, Arts and Recreation Kazembe Kazembe has taunted disgraced former First Lady Grace Mugabe saying Grace's public attack on him made him 'famous' in a negative way. Kazembe who was addressing villagers at the Nyanga is…
Gunshots Fired At Kasukuwere’s Glen Lorne Residence
Self-exiled Minister of Local Government and member of the G40 Cabal, Saviour Kasukuwere has probably left the country amid concerns over his personal security. This is after several gunshots were fired at his luxurious Glen Lorne residence…
Zanu PF Secretary for Youth Affairs, Kudzayi Chipanga has called for the immediate removal of Vice President Emmerson Mnangagwa after accusing him of fanning factionalism and disrespecting President Robert Mugabe. Chipanga's call comes…
Lovejoy Mutongwiza	 Sep 14, 2017
Zimbabwe National Liberation War Veterans' Association chairperson has savaged the G40 faction and vowed to deal with them accordingly. He launched a scathing attack on the ruling party ZANU PF's structures, saying the leaders have…